Nhau - Beijing topsky akapinda mumhemberero yekuvhura yemukati memongolia yakazvimiririra dunhu rekuchengetedza mwedzi.
Beijing topsky akapinda mumhemberero yekuvhura yemukati mongolia yakazvimiririra dunhu rekuchengetedza mwedzi mwedzi.
PaJune 1, iyo Autonomous Dunhu's 2018 "Yekuchengetedza Kugadzira Mwedzi" chiitiko chakatangwa muUlan Qab. Ndiwo wechigumi nemanomwe "Mwedzi Wekuchengetedza Kwekuchengetedza" munyika, uye dingindira rechinoitika ndere "Hupenyu Kutanga, Kuchengetedzwa Kwekuchengetedza"
Munzvimbo huru ye "Chengetedzo Yekugadzira Mwedzi" chiitiko munzvimbo inozvitonga, huwandu hwevanoda kusvika mazana matatu ekuchengetedza nzvimbo dzekugadzira nzvimbo dzakatumirwa muchiitiko ichi, uye vakaona kutora chikamu mu "kuboora moto munzvimbo dzine vanhu vazhinji", kubvunza uye moto midziyo yechimbichimbi inoratidza mabasa. Zvinonzwisisika kuti vangangoita zana vanodzima moto, vanopfuura kudzima moto makumi maviri uye dzakasiyana mota dzekukurumidza dzakapinda muchiitiko ichi; vanopfuura vanunuri vezvechiremba makumi matatu, maamburenzi matatu, uye vanhu vatatu mukutambudzika vakatumirwa. Beijing Lingtian akaunza marobhoti anorwisa moto uye marobhoti ekudzimisa moto kuInner Mongolia Autonomous Dunhu Rekuchengetedza Mwedzi.
Irobhoti inorwisa moto inotora chinokambaira + swing ruoko + vhiri chassis dhizaini, iyo inogona kuchinjika kune dzakasiyana siyana yakaoma nzvimbo munzvimbo yekununura. Yakashongedzerwa neyekutsvagisa yekuona mudziyo kuti uone pane-saiti nharaunda data uchidzimisa moto. Irobhoti yekudzimisa yekuziva moto inoumbwa nezvikamu zvina: muviri mukuru we robhoti, moto wekutarisa, mudziyo wekuona zvakatipoteredza, uye bhokisi rekudzivirira. Basa guru ndere kutsiva vanodzima moto kuti vapinde munzvimbo inopisa, inoputika, ine chepfu, isina oxygen, utsi hwakakora uye dzimwe tsaona dzinenjodzi kuti dziite kurwisa moto nekununura, kuona kwemakemikari uye kuona nzvimbo yemoto.
1. Chassis dhizaini yemoto-inorwisa hutsi hwekuona robhoti inokambaira + inokwenya ruoko + vhiri mhando. Iyo yekumberi uye yekumashure yakapetwa kaviri maoko uye chinokambaira chinogona kutyaira dzakasiyana nzvimbo dzakaomarara. Iyo simbi yemukati mhete inoshandiswa kune matai, ayo asingori chete anowedzera kumhanya kwekufamba, asi zvakare anovimbisa kuti iyo rubber inonyungudika pakakwirira tembiricha. Mushure meizvozvo, unogona kufamba.
2. Iyo 4G isina waya yekufambisa system inogona kuendesa panguva imwe chete vhidhiyo uye nedzekutarisisa data kune iyo command centre kuburikidza ne network kutaurirana, ichiziva "vatatu-mu-mumwe" moto rairo system.
3. Dhata uye vhidhiyo shandisa mbiri-chiteshi kunyorera kutapurirana, kureba kwekutaurirana daro, yakasimba anti-kupindira, uye isina waya kutonga daro remamita 1000.
4.Kutora yakakura-inokwana simba bhatiri pamwe DC mbiri mota, modular yakaparadzirwa dhizaini, yakakwira maneuverability.
5. Mutumbi wemota unotora nzira mbiri dzekugashira mvura, dzinogona kutyaira mabhandi emamita zana-makumi masere makumi masere emvura kufamba.
6. Iyo moto yekutarisa iri kure inodzora yemahara kutsvaira, yakananga ikozvino, uye pfapfaidzo inoenderera ichigadziriswa.
7. Yekuzvidzivirira yekupfapfaidza kifaa ine yakanaka mvura mhute, kutonhora kurapwa
8. Kuongorora pamhepo, kunyevera kwekutanga, kudzivirira uye kudzora magasi ane chepfu uye anokuvadza, mwaranzi yenyukireya, kupisa kwemhepo, kupisa uye mwando panzvimbo yekununura.
9. Inokodzera petroleum uye petrochemical, zvine njodzi yekuita zvakatipoteredza.
10.4 migero yepamusoro-tsananguro infrared makamera kuti uwane panoramic chiratidzo modhi.